Ipemethe yokusebenza-yezigidi zabenzi
Iimvume zokusebenza ngaphakathi
Siyabaxhasa abaBodwa kunye neeNkampani ekufumaneni amathuba kunye nabagqatswa, ngokulandelanayo kwaye ke ekusebenziseni nasekugqibezeni inkqubo.
Ngenkxaso yethu ecacileyo, emfutshane kunye neyabucala, uya kuyiqonda indima yakho kwinkqubo yokufudukela kwelinye ilizwe kwaye uyazi kakuhle into ekufuneka uyenzile ukuze wena nosapho lwakho niye kwikhaya lakho elitsha ngokukhawuleza. Kwa ezona mfuno ziphambili zokufuduka zihlala kunzima ukuziqonda-ungaze ukhathalele iiparameter zezikim ezininzi zokufuduka. Ukuba ufumanisa ukuba ulahlekile kulwandle lwemithetho yokungena elizweni kunye nemigaqo, abaMenzi ezigidi baya kuququzelela. siza kwenza into enzima, ethe tye kwaye elula, njengoko siza kuzama ukukukhokela kunye nosapho lwakho ngemfuneko yokufudukela kwilizwe lakho elitsha. Ngenkxaso yethu emfutshane, ecacileyo kunye neyenziwe ngokwezifiso, uyayiqonda indima yakho kwinkqubo yokufudukela kwelinye ilizwe kwaye uqaphele ngokuchanekileyo into ekuya kufuneka uyenze ukuze wena nosapho lwakho niye kwikhaya lakho elitsha ngokukhawuleza ngendlela eyiyo.
Ngamanye amaxesha iimfuno ezilula zokufuduka zinokuba nzima kakhulu ukuziqonda, kodwa, ungaze unake iparameter yesikim sokungena kwabantu abaninzi. Ukuba ufumanisa ukuba ulahlekile kulwandle lwemithetho nemigaqo yokufudukela kwelinye ilizwe, baya kwenza izigidi zeMatshi. Siza kwenza ukuba kube lula kakhulu njengoko sinomkhwa wokukhokela wena kunye nosapho lwakho ngeemfuno zokufika kwilizwe lakho elitsha.
Ngenkxaso yethu ecacileyo, elula, eqaqambileyo, enomdla neyenzelwe umntu, uya kuyiqonda kakuhle indima yakho kwinkqubo yokufudukela kwelinye ilizwe kwaye uqonde ngokuchanekileyo oko kuya kufuneka ukwenze ukukuphembelela wena kunye nosapho lwakho kwikhaya lakho elitsha ngokukhawuleza.
Ukukhethwa kwamathuba / ukhetho olukhethileyo lokufezekisa ngempumelelo iiNjongo kunye neenjongo.
24/7/365 ukufikelela kumatyala akho nakweyiphi na indawo ngaphakathi emhlabeni.
Ukufikelela kwimithetho emitsha yabafuduki, imigaqo kunye neendaba.
Nokuba unemfuno enkulu yezolawulo okanye ufuna uncedo lokufudukela kwelinye ilizwe okanye ummandla ocacileyo, abenzi beMiliyoni bazokunceda ngaphandle komthungo kulawula ukuhamba kwabasebenzi / kwabasebenzi. Yenzelwe ukwanelisa iimfuno zakho zenkxaso ebanzi, uluhlu lwethu olupheleleyo lweenkonzo zemvume yomsebenzi kunye neenkonzo zokugunyazisa ziqinisekisa ukuqinisekiswa kwenkqubo nemithetho yokufudukela kwelinye ilizwe.
Ezi nkonzo zibandakanya:
Ukulungiswa kwesicelo kunye nokufayilisha komsebenzi wethutyana kunye neemvume zokuhlala, ii-visa zokungena, ukucaciswa kokungena kunye nemicimbi yabafuduki.
Imicimbi yeVisa yokuxhasa.
Iingcebiso malunga nokungenela kunye neenkqubo zokumka.
Iingcebiso malunga nokhuseleko kunye nenkqubo yezonyango.
Ukucetyiswa kwamatyala anzima, kubandakanya inkxaso kunye nenkxaso phambi kweearhente zikarhulumente.
Iingcebiso malunga nokulungiswa kwamalungu osapho kunye nokujongana namalungu osapho, ukukwazi ukubala izinto, imicimbi enxulumene nomfundi kunye nokulondolozwa kokuma kunye nenqanaba.
Iqela lethu leengcali ezaziqhelanisa nomsebenzi onamava zithathe ixesha lokuqonda iinjongo zeshishini lakho, iinjongo zokufudukela kwelinye ilizwe kunye nabantu ababhinqileyo. Banxibelelana ngokukhululekileyo nawe kunye nabantu obabambeleyo kuyo yonke inkqubo yokufuduka, bakha ubudlelwane obuthembekileyo kunye nokubonelela ngenkxaso ebanzi, egqibeleleyo.
Khetha ilizwe lemvume yokusebenza
Amazwe anqwenelekayo aphezulu ngabagqatswa
Sisebenza nabaGqatswa kunye nabaqeshi kula mazwe achazwe ngezantsi: